Khohlwani ubuhlanga sijabulele ukuwina kwesizwe
ABADLALI bamaSpringboks bawuqale eGoli umjikelezo wokukhombisa iNdebe yoMhlaba abayinqobe eJapan. Isithombe: Nokuthula Mbatha African News Agency (ANA)
sihle ndlovu | November 8, 2019
NGINESIQINISEKO sokuthi akukona okokuqala ngisebenzisa okwashiwo owayengumengameli wokuqala wentando yabantu eNingizimu Afrika, uNelson Mandela, kule ngosi, ukudlulisa lokhu engifuna ukukusho.
UMandela wathi, akunandaba ukuthi ikati limhlophe noma limnyama, inqobo nje uma likwazi ukubamba amagundwane. Ngicabanga ukuthi lokhu okushiwo lapha kusobala njengezinqe zesele, ngakho ngeke ngizigqilaze ngokuziphathisa ngekhanda, ngizama ukuchaza ukuthi uMandela wayechaza ukuthini.
Ngiyazi ukuthi kukhona labo abangayingeni indaba kaMandela nakho konke akwenzela iNingizimu Afrika ukuze ikhululeke. Baningi kakhulu abamnyama abakholwa wukuthi uMandela ‘wasidayisa’ kwabamhlophe ngoba wakhetha ukusebenzisana nabo esikhundleni salokhu ababekulindele, ukuthi athi abaphindele lapho baqhamuka khona noma kube khona ukuziphindiselela ngandlela thile kubona. Nokho asiyi nganxanye singamanzi, ngakho ngizoyishaya kanje le ndaba.
Ngaphambi kokuthi ngihlale ngqo kulokhu engifisa ukuloba ngakho namuhla, ngithanda ukukucacisa ukuthi ngijabule kakhulu ngokuthi iqembu lesizwe lakuleli, amaBhokobhoko, liwine iNdebe yoMhlaba. Ngijabule kakhulu nje futhi anginawo ukodwa.
ABADLALI bamaSpringboks abaseThekwini namhlanje njengoba benomjikelezo wokukhombisa iNdebe yoMhlaba abayinqobe eJapan. Isithombe: Leon Lestrade/African News Agency(ANA).
Angazi ngempela iqhamuka kuphi le nto yobuhlanga uma sikhuluma ngomsebenzi omuhle owenziwe yiqembu lakuleli ebeliholwa umqeqeshi nguRassie Erasmus nokaputeni uSiyamthanda Kolisi.
Babodwa ababona iqembu lakuleli lingamele abantu abamnyama ngoba iningi labadlali limhlophe. Babodwa ababuka uKolisi njengesiduphunga nje esincetheza kwabamhlophe kodwa abangasoze bamamukele noma ilanga lingaphuma eningizimu.
Uyawazi umbhedo wokuqala wokugcina! Sifika kanjani nje lapho uma kufanele sijabulele iqembu lethu lesizwe ngokuphakamisela phezulu ifulegi lezwe lethu kodwa silibalele indaba yobuhlanga?
Kubo bonke abantu abangicasule ngamalengiso abekho abafika kulaba abangabaholi abavotelwa yithi uqobo ababhala izinto ezingakhi ezinkundleni zokuxhumana. Ngiyazazi izinkinga zezwe lethu futhi ngiyazi ukuthi kuningi esisasalele emuva kukona. Engizibuza kona ukuthi kungani kukhona abafuna ukusifunza izinto ezithile sengathi thina asihlali eNingizimu Afrika?
Ngo-1995 uMandela waphakamisa iNdebe yoMhlaba yebhola lombhoxo ebambisene noFrancois Pienaar, kwajabula yonke iNingizimu Afrika. Sasingekho isidingo sokukhuluma ngezinto ezithinta ubuhlanga lapho ngoba okwakubalulekile ukuthi amaBhokobhoko ayengompetha.
BAPHUME ngobuningi babo abantu basePretoria bezobungaza abadlali bamaSpringboks abanqobe iNdebe yoMhlaba. Isithombe: Bongani Shilubane African News Agency (ANA)
Ngo-1996 uMandela waphinde waphakamisa indebe ye-Africa Cup of Nations (Afcon) neBafana Bafana eyayiholwa uNeil Tovey, kwahlokoma izwe lonke. Nalapho akukaze kuqubuke indaba yobuhlanga futhi sasingekho isidingo.
NgoMgqibelo ngesikhathi uMengameli wezwe, uCyril Ramaphosa, ephakamisa iNdebe yoMhlaba noKolisi, sijabule sonke kodwa kwakhona labo abafuna ukuziveza ukuthi bahlakaniphe kakhulu. Mina njengoba ngibhala le ngosi, futhi ngilindele ukubhiyoza namaBhakobhoko njengoba ehamba ekhombisa ngendebe ayiwinile, angifuni ukukala ukuthi isizwe sibumbene kangakanani ngoba akuwona umsebenzi wami lowo.
Njengoba ngishilo ekuqaleni, siyisizwe sinazo izingqinamba esibhekene nazo eziningi, futhi asihlukile kakhulu kwamanye amazwe akuthola kunzima ukuthola izisombululo zezinye izinkinga. Kodwa lokho akusho ukuthi kumele singabe sisajabuli ngoba nakhu sishaya amakhala ngokumeleleka kwabamnyama ebholeni lombhoxo.
Bonke abadlali bamaBhokobhoko abebeyibambe eJapan bebekhona ngoba kubafanele ukugqoka imibala eluhlaza nesagolide yezwe lethu, kungakhathalekile ukuthi bamhlophe, bamnyama, baphinki noma babomvu. Angikaze ngizwe ukuthi eNingizimu Afrika kukhona umuntu ongavunyelwe ukudlala umdlalo othile selokhu izwe lakhululeka ngo-1994.
Angazi ukuthi ngumuntu ocabanga kanjani obona ukuthi kufanele kugiye abantu abamnyama ebholeni lombhoxo, sibe sazi ukuthi lowo mbhoxo awudlalwa ezikoleni zethu.
Iqiniso lapha wukuthi abamhlophe abadlala ibhola lombhoxo yingoba kubafanele ukudlala eqenjini lesizwe. Thina abansundu kusafanele sizibuze ukuthi yini esikwazi ukuyenza kahle njengoba nebhola likanobhutshuzwayo lisihlula libe liphethwe yithina.
Kuyiphutha likabani ukuthi iBafana Bafana iyahluleka ukwenza kahle kwi-Afcon nokuzibekisela indawo kwiNdebe yoMhlaba? Yiphutha lethu impela singabantu abamnyama ngoba yithina esiziphathele unobhutshuzwayo, okuyinto esihlula ngamalengiso. Ezikoleni zabantu abamnyama ibhola life nya, ngakho akumele nje sicabange ngombhoxo sibe sihlulwa yilokhu okumele ngabe sikwenza kahle nesinekhono kukona.
Yize sengikushilo lokhu, uma kwenzeka ngelinye ilanga iBafana iphumelela kumele sijabule sonke ingakhulunywa indaba yebala.
Okwenzeke ngoMgqibelo wukuthi iNingizimu Afrika iwine iNdebe yoMhlaba yebhola lombhoxo. Yizwe lethu eliwinile hhayi uKolisi noma uHandre Pollard. Laba bafana badlale ngokuzimisela nokubambisana njengeqembu ngakho asingabahlukanisa phakathi ngokubhala izinto ezingakhi ezinkundleni zokuxhumana.
Asijabulele ukuthi ikati ebesilithume eJapan libuye negundwane. Asikho isidingo sokuvusa eyobuhlanga noma sesiphumelele siyisizwe.
Isikile iChiefs kuBaxter: Ntseki
Kuqhume inganono erenki kubulawa usomatekisi
Kuphenywa ngogodukiswe esibhedlela engathungiwe
Isihluku kubulawa intombazane ena-14 eHammarsdale
Sebelala obenyoni abasinde “amaphoyisa” engqongqisa izimoto